I-FX-Heavy 'Blood Quantum' Drops kwi-Shudder In Surprise Release
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	I-FX-Heavy 'Blood Quantum' Drops kwi-Shudder In Surprise Release
by UTimothy Rawles Aprili 28, 2020
by UTimothy Rawles Aprili 28, 2020 1,204 imbono
Kule nto omnye umgxeki ayibiza ngokuba "Ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa njengesihogo," Igazi leQuantum ndiye ndothuka ngequbuliso kuShudder ngale ntsasa.
Njengengxenye yabo "Isiqingatha seNyanga yeHalloween" inkonzo yokusasaza yanquma ukuba iya kuba lixesha elifanelekileyo lokuthumela le ntandokazi yomthendeleko owuthandayo kwiqonga labo.
"Besisazi ukuba ifilimu ibalulekile kwaye inexesha elifanelekileyo xa siyifumene kunyaka ophelileyo, kodwa sinikwe iziganeko zamva nje, Igazi leQuantumImixholo yokwahlukaniswa, uloyiko lokosulela, kunye nobuntu obujamelana nengxaki yentsholongwane yehlabathi zikhule ngakumbi, utshilo uMlawuli Jikelele weShudder uCraig Engler. "Xa umdlalo weqonga ungalawulekiyo ngenxa yobhubhani wehlabathi lokwenyani, sithathe isigqibo sokukhawulezisa ukwaziswa kwefilimu kaBarnaby ukuze ifikelele kwabona bantu baninzi."
Ifilimu ilandela ubhubhane wabantu abafileyo ababuyela ebomini kufutshane ne- Ugcino lweMi'gmaq lweRed Crow ethi ngandlela thile ikhuseleke kuyo. UTraylor (Greyeyes), usherifu wesizwe, kufuneka "akhusele intombi yakhe ekhulelweyo yonyana wakhe, iimbacu ezingaphefumlelwanga, kwaye agcine ubundlongondlongo kubantu abaninzi bezidumbu ezimhlophe."
UMlawuli uJeff Barnaby (Iimvumi zaBaselula uGhouls) ungumenzi wefilimu weZizwe zokuQala ozelwe kwindawo yokugcina iMi'gmaq, apho Igazi leQuantum ithatha indawo. Wenza umsebenzi ophindwe kane apha njengombhali, umlawuli, umhleli kunye nomqambi. Iifilimu zakhe zihlala zisasazwa kuluntu lwaBemi Bomthonyama kwaye zipeyinta umfanekiso oqaqambileyo nobukhali wobomi babemi bemveli kunye nenkcubeko-kule meko, ukuyipeyinta egazini.
Igazi leQuantum Inkulumbuso kwi-TIFF's Midnight Madness block kwi-2019 ngohlaziyo oluqinisekileyo. Umgxeki we-iHorror uKelly McNeely Ukuthetha ngemiphumo yonyaka"Le yifilimu ebonakalayo enokwenza uTom Savini azingce, enexesha lokunika imbeko kwesinye seziganeko ezinoburhalarhume Ukusalalisa kwabafileyo.
Nantsi inqwelo erhuqwayo: